Nnukwu ụgbọ elu na Palma de Mallorca, gburugburu, na eDreams | Akụkọ Njem
Carmen Guillen | | Spain obodo, Mgbidi, Palma de Mallorca
Dịka ị ga-amata nke ọma ebe a, ka ụbọchị ụgbọ elu ahọpụtara na-eru nso, enwere oche efu na ụgbọ elu na-adịkarị ala karịa ndị izizi enyere. Ọ bụ ya mere anyị ji chọọ maka onyinye ụgbọ elu ịga Palma de Mallorca (Nwee obi uto osimiri ya na oke ohia di ebube ugbu a na ihu igwe di nma abia) site na ebe di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche (Seville, Madrid, Valencia, wdg) Onyinye na-ewetara anyị ya eDreams Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, tụlee ego a na-enye ya na nkenke echiche banyere ihe ị ga-ahụ na Palma de Mallorca, nọgidenụ na-agụ ọmarịcha onyinye a.
Cheta na ọ bụrụ na ịchọrọ ka a gwa gị kwa izu banyere onyinye niile anyị na-eweta ebe a, ị nwere ike ịdenye aha na nke a njikọ. Mgbe onyinye ọhụrụ pụtara, ọ ga-abata ozugbo na adreesị ozi-e nke ị banyere. Nke ahụ dị mfe!
1 Onyinye sitere na eDreams
2 Ihe ị ga-eme ma ọ bụ hụ na Mallorca
Onyinye sitere na eDreams
Nke a bụ njikọ na-eduga gị na onyinye a magburu onwe ya. Ọ bụrụ na ịpịrị ya, ị ga-ahụ na ọ bụ maka ụgbọ elu, nke na-eme ma ụbọchị izu ma na ngwụsị izu. Fọdụ ga-apụ na Mọnde na-esote, Mee 29, ndị ọzọ maka Mee 17 ọzọ, maka Satọdee Mee 20, wdg ... Na ezigbo ihe ha nwere, ma e wezụga na enwere oge ịhazi oge njem ahụ ma ọ bụrụ na ị na-etinye oge ezumike ma ọ bụ gị nwere ike imeli ya, bụ na ha si n'akụkụ dị iche iche nke anyị Spanish ọdịdị ala. Ibiza, Alicante, Malaga, Valencia, Bilbao ma ọ bụ Seville bụ ụfọdụ ọdụ ụgbọelu na-apụ apụ a na-enye ha, ma e nwere ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-elele ọnụahịa ndị a na-atụle, ha bụ ezigbo ahịa ọ bụkwa ya mere anyị ji hụ na ọ dị mma iwetara gị ohere ọma a. Onye na-agaghị aga Mallorca maka euro 15? Ma ọ bụ maka euro 24? Ha bụ ndị oke ahịa!
Echefula ohere ma tinye nke gị ugbu a na eDreams ... You nwekwara ohere ịnweta ụlọ nkwari akụ, ụlọ mbikọ ma ọ bụ ụlọ ọnụ na tiketi ụgbọ elu (njem njem) iji nọrọ ụbọchị ole na ole n'ebe ahụ. Ha na-adịkarị n'etiti abalị 3 na 5, ụlọ ọrụ a na-adịkwa mma ka ị ghara ịchọ ebe obibi na ibe ọzọ. Ọ dị mma karị ma dịkwa ọnụ ala inweta ya. ụgbọ elu + mkpọ obibi.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụ hụ na Mallorca
Mallorca bu agwaetiti buru ibu na mpaghara Balearic. O nwere onu ogugu mmadu karịrị 860.000 ma dịka ị ji n'aka, enwere nnukwu mpaghara ebe ndị kacha nwee ọnụ ọgụgụ ndị German na ndị Bekee. Ha achọtala na Mallorca ebe mara mma iji zuru ike ma tụgharịa uche maka ịma mma ndị dị mma. Ka anyị ghara ikwe ka ndị si mba ọzọ kụziere anyị ka anyị jiri ihe anyị nwere kpọrọ ihe ...
Ọ bụrụ na ị gaa Mallorca na ohere a nke na-eweta gị eDreams, ị ga-ahụ ihe na ebe ndị na-esonụ:
Lee Ugwu ugwu Tramuntana ma gbaa igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ njem njegharị nke ọ haziri.
Mara nke a Nke a bụ Castell de Bellver.
Hụ egwu Katidral MallorcaMara mma!
Gaa na-enwe na Ogige Mmiri Aqualand El Arenal, ndị kasị ibu na Mallorca.
Na-atụgharị uche n'ọdịda anyanwụ na ha osimiri mara mma na coves (nwee biya na-enwe ọmarịcha echiche).
Gaa na ụfọdụ n'ime ha obodo mara mma dị ka La Algaida, Búger, Petra, Maria de la Salut, San Joan, Santa Eugenia, Sa Pobla, wdg.
Omume mmiri mmiri ma ọ bụ okpokoro ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ ndị a ... A na-enye klas ma enwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke usoro a haziri ahazi nke ụdị a maka ndị hụrụ oke osimiri n'anya.
Ihe ndị a bụ isi ole na ole n’ime ọtụtụ ihe dị ebube ị pụrụ ịhụ ma mee n’agwaetiti Balearic. Echefula ileta Mallorca na ohere a magburu onwe ya anyị na-enye gị. Kedu mgbe ị ga-enweta onyinye ka mma?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Mgbidi » Nnukwu ụgbọ elu na Palma de Mallorca, gburugburu, yana eDreams